China 3D Embossing More Nature Waterproof oghere WPC Decking emepụta na suppliers | Lihua
3D Embossing More Nature Waterproof oghere WPC Decking
Nwee ngwaahịa:3D WPC Decking
Mentkwụ ụgwọ:TT / LC
Ahịa:$ 2.45 / Nwoke
Agba:Grey, Teak, Unyi, Chocolate, Brown, wdg
Port Mbupu:Ọdụ ụgbọ mmiri Shanghai
Etiti oge:-16BỌCH 8 8-16
2.4m, 3.6m, ma ọ bụ ahaziri
Ogige, Ogige, Ogige
Ahịhịa na Sanding
1.New technology 3D embossing WPC n'èzí mma n'ala, ji achọ nkwalite. 3D embossing technology bụ Elu na-atụ atụ usoro. Ala nke ọ bụla dị ka ihe ọkpụkpụ, na ọnọdụ nka na ogo ọhụụ ka mma nke ukwuu. Oge gboo 3D embossing bụ nnukwu mmụba na ala osisi-plastik a hụrụ, nke na - enweghị ike ịdegharị ya na ndị agha ma na - akwado akara nke mbido mbido.
Omenala wpc mejupụtara decking dị mfe ida ọka n'elu, super embossed decking ịrụ mma karịa ihe ọ bụla nkịtị mejupụtara osisi, ọ bụ ihe eke na mma, mma fading na ọkọ-eguzogide ọgwụ.
3.Lihua's super embossed WPC decking nwere uru niile nke ọdịnala mejupụtara decking , a ka edobe ya: waterproof, anti-UV, weather resistant, mgbochi corrosion, ahụhụ mgbochi, obere mmezi, ogologo ọrụ ndụ wdg long Na miri embossed mbadamba anya ma na-eche ihe dị ka eke osisi n'ihi 3D embossing ọgwụgwọ nke elu ala.
Ntuziaka ogologo oge: Pụtara 46, Min 44 Usoro ihu: pụtara 55, Min 53
EN 15534-1: 2014 Nkebi 7.1.2.1 EN 15534-4: 2014 Nkebi 4.5.1
Ọ dịghị nke ntule ga-ọdịda na mgbape n'ogologo
Max.Crack ogologo (mm): Ọ dịghị mgbape Max. Mkpokọta indenation (mm): 0.31
Oge: 330mm, MeanS 65 1.65mm, Max ∆S 1.72mm, Pụtara ∆Sr 1.27mm
Mgbapụta Ọbara: 1.81% na ọkpụrụkpụ, 0.22% n'obosara, 0.36% n'ogologo Max Ọcha: 2.36% n'obosara, 0.23% n'obosara, 0.44% n'ogologo Mmiri mmiri: Pụtara: 4.32%, Max: 5.06%
EN 15534-1: 2014 Nkebi 8.3.3 EN 15534-4: 2014 Nkebi 4.5.5
Mmiri mmiri dị arọ: Mean≤7%, Max ,9%
Nke gara aga: 3D Embossing Weather Nguzogide mejupụtara oghere WPC Decking
Osote: Ahụhụ Mgbochi Recyclable Wood Plastic WPC Decking
-Familiarize onwe gị na ntuziaka nwụnye.
-Ekwela slikọ ibe gị mgbe ị na-ebugharị ha. Mgbe ị na-ewepu ha na otu, bulie oche ahụ wee debe ha.
- Nọgidenụ na-ekpuchi ebe a na-enweghị ihe mkpofu.
-N'ihi na osisi niile, ọkọlọtọ osisi na-arụ ọrụ ngwaọrụ nwere ike a ga-eji, dị ka kwa na ọdabara emeputa ntụziaka.
-Scrap nwere ike tụfuo na nkịtị na-ewu irighiri.
-wood nwere ihe nkpuchi zoro ezo n'ime ya ma dikwa nfe itinye osisi mkpachị.
-Eji opekempe # 8 x 2-1 / 2 dị elu dị elu, igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ ihe mejupụtara oche.
Achọrọ Ventilata Kwesịrị Ekwesị
nke 12 ”ikuku sara mbara nke na-aga n'ihu na-aga n'ihu n'akụkụ atọ nke oche ahụ iji nye ohere maka ikuku ikuku.
-N'ime ụfọdụ ngwa ole na ole, gụnyere ụgbọ mmiri wuru n'akụkụ nkuku, a ga-achọrọ ikuku ikuku ọzọ ebe oche ahụ ga-ezute ụlọ ahụ. Enweghị ike inye ezigbo ikuku ikuku nwere ike ime ka ọdịda oche daa, ọ ga-emebi akwụkwọ ikike ahụ.
You nwere ike ịchekwa oge owuwu ụlọ na ụgwọ site na ịmebe, chee ịhazi atụmatụ ihe ndị dị mkpa dịka ebumnuche mmemme ahụ. Nwere ike ịhọrọ ihe nke aka gị dị ka ịchọrọ site na iji ọtụtụ ụdị nhọrọ osisi, ihe owuwu osisi, ọrụ ịwa osisi nwere ike iji maka igbutu, ịcha osisi, ịkụ ala na ihe ndị ọzọ.
Mgbe ị wụnye ihe ndozi ahụ, na mbụ, ị ga-eme ka mgbatị siri ike na ala, wee dozie ihe ahụ na-eme ka ala ahụ sie ike. Anyị na-akwado ọkwa egwuregwu maka 35-40cm. Enwere ike ịmelata oghere ọrụ dị ka achọrọ.
Nkwonkwo kit nke osisi decking bụ igwe anaghị agba nchara. Drgbapu ahihia kwesiri pere mpe karịa dayameta nke nkedo ihe nkedo nke 3/4 iji mee ka ihe nkedo onwe onye na-ejide nke mbọ.
Ogologo nke mpempe akwụkwọ a ga-emetụta n'ihi nnukwu ebe a na-ewu ihe. Anyị na-akwado ngalaba nke oghere 5mm mgbe achọrọ akụkụ obe.
1. ounwere ike ijikọ uzo na ihe nkedo na kposara onwe gị ma ọ bụrụ na obere vidiyo adịghị maka njikọ nke njikọ na decking.
Mgbe ị wụnye ihe ndozi ahụ, na mbụ, ị ga-eme ka mgbatị siri ike na ala, wee dozie ihe ahụ na-eme ka ala ahụ sie ike. Anyị na-akwado ọkwa egwuregwu maka 35-40 cm. Enwere ike ịmelata oghere ọrụ dị ka achọrọ.
Ọzọ jikọrọ ọnụ osisi decking bụ plastic ígwè mkpachị. Drgbapu ahihia kwesiri pere mpe karịa dayameta nke nkedo ihe nkedo nke 3/4 iji mee ka ihe nkedo onwe onye na-ejide nke mbọ.
Nwere ike ijikọ uzo na egwu ahụ na kposara na-ejide onwe gị ma ọ bụrụ na obere vidiyo adịghị na njikọ nke njikọ ahụ na decking.
Mgbe ị wụnye ihe ndozi ahụ, na mbụ, ị ga-eme ka mgbatị siri ike na ala, wee dozie ihe ahụ na-eme ka ala ahụ sie ike. Anyị na-akwado ọ joụ pitch maka 35-40cm. Enwere ike ịmelata oghere ọrụ dị ka achọrọ.
Q: Ogologo oge ole ka ị na-emelite ngwaahịa gị?
A: Anyị ga-emelite ngwaahịa anyị kwa ọnwa.
Q: Gịnị bụ imewe ụkpụrụ nke gị ngwaahịa anya? Kedu uru ndị ọ bara?
A: Anyị na ngwaahịa na-chepụta na practicability nke ndụ, dị ka mgbochi ileghara, ihu igwe na-eguzogide ọgwụ, mgbochi-ada ada, wdg
Q: Kedu ihe dị iche iche nke ngwaahịa gị n'etiti ndị ọgbọ?
Azịza: anyị WPC ngwaahịa na-eji mma na ọhụrụ ihe, otú àgwà ka mma na uru nke technology, anyị price dị nnọọ mma.
Ajụjụ: Ole ndị bụ ndị ọrụ R & D gị? Kedu iru eru?
A: Anyị nwere ndị otu R&D, ha niile nwere ahụmịhe zuru oke na nkezi, ha arụ ọrụ na mpaghara a karịa afọ iri!
Q: Gịnị bụ ngwaahịa gị R & D echiche?
A: Anyị R & D echiche bụ gburugburu ebe obibi enyi na enyi, ala mmezi, ogologo ndụ iji na elu mma.
Q: Gịnị bụ nkọwapụta teknụzụ nke ngwaahịa gị? Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị bụ kpọmkwem ihe ndị ahụ?
A: Nkọwapụta teknụzụ anyị bụ nha, ihe eji arụ ọrụ, arụmọrụ mgbochi, arụmọrụ mmiri, ike ihu igwe, wdg.
3D embossed Decking ụlọ
Oghere WPC decking
Super Embosed oghere decking
3D Embossing Weather Nguzogide mejupụtara Hollo ...
N'èzí Deep Embossed Wood mejupụtara Solid Decking
N'èzí Wood Deep ọka Embossed Waterproof WPC ...
UV Nguzogide Deep Embossed Solid WPC Decking E ...
WPC mejupụtara decking, osisi plastic mejupụtara decking, N'èzí WPC decking, WPC n'èzí decking, WPC decking n'ala, WPC ụlọ,